Alexis Sanchez oo talo-celin muhiim ah ka helay mid ka mid ah halyeeyada kubadda cagta – Gool FM
(England) 26 Juunyo 2019. Halyeeyga reer Chile ee Iván Zamorano ayaa isku dayaya in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Alexis Sanchez uu ka saaro dhibaatooyinka uu kaga noolaa kooxda Manchester United bilihii la soo dhaafay, wuxuun ku dhiiri galiyay inuu ka tago garoonka Old Trafford.
Zamorano ayaa carabka ku adkeeyay in Alexis Sanchez uu u baahan yahay inuu raadsado fursad uu ku ciyaari karo kulamo badan hadii ay ahaan lahayd Manchester United ama koox kale, maadaama uusan helin fursad uu ku ciyaaro isagoo xiran maaliyada Red Devils.
Hadaba Halyeeyga reer Chile ee Iván Zamorano ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Alexis Sanchez wuxuu ku yiri:
“Waxay ku fiicnaan lahayd inuu si joogta ah u ciyaaro hadii ay ahaan lahayd Manchester United ama koox kale, waa muhiim inuu ciyaaro markastana uu tartamo”.
“Waxaan ka hadlayaa waayo aragnimo, marka aad ka maqan tahay wadankaaga isla markaana aadan u ciyaarin si joogta ah, wey adag tahay inaad dib usoo celiso awoodaada ciyaareed, waxaana sidaas ku aragnay marka uusan si joogta ah ugu ciyaarin Red Devils”.
30 jirkan ayaa laba gool u dhaliyey xulkiisa qaranka Chile tartanka haatan ka socda dalka Brazil ee Copa America, laakiin Zamorano ayaa aaminsan in wali uusan fiicneyn qaab ciyaareedka ciyaaryahanka, sababa la xiriira inuusan kulamo badan u ciyaarin kooxdiisa.